DF Somaliya oo War deg-deg ah ka soo saartay Roobab Dabeylo wata oo ku dhuftay PUNTLAND | HalQaran.com
DF Somaliya oo War deg-deg ah ka soo saartay Roobab Dabeylo wata oo ku dhuftay PUNTLAND
Roobab Dabeylo wata oo ku dhuftay magaalooyinka dalka Soomaaliya
Muqdisho (Halqaran.com) – Dabeysha PAWAN ayaa Sabtida maanta ah soo gaartay kuna dhufatay magaalooyin ka mid ah Dalka. Dabeysha waxey ka timid qaybta sare ee koonfur galbeed ee badda carabta, iyadoo ku socota xawaare ka badan 56 km/h.
Dowladda Soomaaliya gaar ahaan qaybta digniinaha hore ee Wasaaradda Gargaarka iyo Maareynta Musibooyinka ayaa ogaatay in duufaanta u soo weecatay dhinaca jihada Soomaaliya goor dambe oo jimcihi ah.
Cabsida jirta ayaa ah in cufka dabeyluhu ay tahay mid xooggan uuna isa soo taro xooggeeda markasta oo duufaanta tiimaado Soomaaliya. Duufaanta ayaa lagu soo waramayaa in ay durba saakay ku dhufatay magaalooyinka qaar ee Puntland.
Sida ku cad jaantuuska idiin muuqda, duufaanta ayaa ku soo durgeysa magaalooyin kale sida Burtinle, Gaalkacyo iyo Jarriiban oo ka mid ah Puntland waxaase la filayaa in uu is dhimo xowliga ay dabelaha ku socdaan marka ay ka soo gudbaan Mgaalad Eyl.
Magoolooyinka dhaca xeebaha ee ka mid ah goballada ugaal, Mudug iyo Bari qeyb ahaan ayaa ah meelaha ay absida weyn ka jirto. Magaalada Eyl ee hoos timaada Gobolka Nugaal ayaa lagu soo waramayaa in ay go’antahay isgaarsiinta taasoo ay keentya markii ay dabeyluhu dhulka dhigeen waayarada is gaarsiinta goor dambe oo jimcihi ah.
Wararka aan ka heleyno magaalada waxey ku soo waramayaan in ay jirto dhimasho iyo dhaawac soo gaaray dadka degaanka. Dhinaca gobalka bari, waxaa ka da’aya roobab xoogan oo kala jaray isu socodka dadka.
Illaa saddex qof ayaa lagu soo waramayaa in ay daadadka kula tageen gobalka Bari. Garwe, waxaa dib loo dhigay duullimaadyada baaxadda roobabka ka da’aya awgeed.
Dabeysha PAWAN oo sabtidii maanta ku dhufatay magaalooyinka dalka Soomaaliya